China ALIGNER 63 -315mm Holding Pipes Still HDPE Welding Machine Plastic Pipe Tools Aligner Manufacture and Factory | UTSHINTSHO
I-ALIGNER 63 -315mm yokubamba imibhobho nangoku i-HDPE yeWelding Machine yePlastiki yezixhobo zeAligner
1. UMLUNGISELELI Isixhobo sobuchule sisisitopu sokubamba imibhobho emileyo kwaye ilungelelaniswe ngexesha le-electrofusion.
2. Isaligner 63 senziwe phantse ngokupheleleyo kwisinyithi esikhethekileyo seAluminiyam kwaye sibonisa ukudityaniswa okuphakathi kwizikhundla ezisisigxina kwi-45 degree kunye ne-90 degree, kwizibophelelo ezizimeleyo ezingafuneki ziadaptha.
3. Ukubanakho ukuxolela kwakhona inxenye enye ye-axis ephethe izinto ezibambe kunye nokubambelela enye ngokwayo, ivumela ukusetyenziswa kweetephu ngexesha lokudibana.
Ixabiso Factory HDPE Welding Machine Plastic Pipe Izixhobo Aligner
Ubukhulu (W * D * H):
Ubunzima (ukwakhiwa kweMigangatho):
Uluhlu olubi 20-63mm 63-160mm
Ubukhulu beMax 600 * 160 * 116mm 980 * 430 * 260mm
Isilinganisi sobunzima 3.4KG 9KG
Ingxowa yezothutho 440 * 190 * 140mm 0.5KG 1.5KG
Isixhobo sobuchule sisiseko sokugcina imibhobho imile kwaye ilungelelaniswe ngexesha le-electrofusion. i-aligner 63 yenziwe phantse ngokupheleleyo kwiAluminiyam ekhethekileyo kwaye ibonisa ukudityaniswa okuphakathi kwezikhundla ezisisigxina kwi-45 degree kunye ne-90 degree, kwizibophelelo ezizimeleyo ezingafuneki ziadaptha. Ithuba lokuxolelwa kwakhona kwelinye icandelo le-axis elithwala ii-clamp kunye ne-clamp enye ngokwayo, ivumela ukusetyenziswa kweetephu ngexesha lokudibana.
UMLUNGISI 160 UKUKHANYA
Esi sisixhobo sobungcali sinyanzelekile ukuba sibambe imibhobho emileyo kwaye ilungelelaniswe ngexesha le-electrofusio (ukusuka kwi-63-160mm). i-aligner160 UKUKHANYA yenziwa phantse ngokupheleleyo kwi-Aluminium alloy ekhethekileyo kwaye inendibaniselwano esembindini yezikhundla ezisisigxina kwi-45 degree kunye ne-90 degree, ezine zokuzibamba ezizibophelelayo ezingafunekiyo iadaptha, kwaye xa ucela i-asi eyongezelelweyo ezalisiweyo enezibopho ezimbini zentsimbi ite. Ukukhutshwa okukhawulezayo okukhawulezayo kwamasango kunika ukukhutshwa kombhobho ngokukhawuleza xa sele udityaniswe.
Esi sixhobo sobuchule sisiseko sokubamba imibhobho emileyo kwaye ilungelelaniswe ngexesha le-electrofusio (ukusuka kwi-63-200mm).
I-aligner63-200 yenziwe ngentsimbi ngokupheleleyo, inendawo yokudibanisa engqinelanayo kunye nemibhobho yokuqinisa imibhobho emiswe kwi-anex. Uhlengahlengiso lwejoni lungasetwa kwizikhundla ezi-4 ezahlukeneyo zomsebenzi ukuvumela ukuwelda kwii-engile ezisetiweyo ezinje nge-30 °, 60 ° 90 °, emgceni kunye ne-T welding.
Ii-axes zinee-clamp ezimile njengo-V ezibekwe kuzo, ezixhotyiswe ngamabhanti okubopha imibhobho. Inkqubo, kunye nokulungiswa kombhobho kwi-clamp, isebenza njengesixhobo sokugxila. I-axis nganye inezikhokelo ezi-2 apho ii-clamp zikwazi ukutyibilika.
Ukuphathwa kwamacala asecaleni kuqinisekisa ukubambeka ngokulula ngexesha lokuhamba nokubekwa, zombini ngexesha leenkqubo zokuwelda, kunye nokulungiselela kwangaphambili.
I-algner iyafumaneka kulungelelwaniso ezimbini: 2 ixhala kunye ne-3 anex.
Egqithileyo I-R-SB40 enkulu yeRod Extruder Handle Sebenzisa iPlastiki ye-Welding Gun
Okulandelayo: Iplastiki ye-extrusion Welding Gun yedijithali yokubonisa isilawuli i-extrusion welder
T1 T3 TU140 izixhobo Pipe Plastic Nikeza Tube Pipe ...
PS180 PS400 isilinganisi / zeplastiki Gas Pipe umbhobho Amanzi ...
TURBO 20mm-63mm isuntswana / Pe Amanzi Pipe Isixhobo Plas ...
Ubungakanani obukhulu bePlastiki yomsiki we-T3 T4 Uluhlu lwasendle ...
C1 C2AC C3Manual Sika Of Plastic Imibhobho Ucheba Pl ...
IHDPE Pipe yangaphakathi Ukulahla kwangaphandle kunye nombhobho ...